Redmi waxay dhawaan daahfuri doontaa smartwatch u gaar ah | Androidsis
Isla toddobaadkan Xiaomi Mi Watch ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay, Saacaddii ugu horreysay ee sumadda Shiinaha. Saacad u isticmaasha Wear OS inay tahay nidaamka hawlgalka taasna waxay dhiirrigelin u noqon kartaa nidaamkan hawlgalka. Astaantu waxay leedahay qorshooyin cad oo ku saabsan arimahan la xidhan karo. Maadaama aan sidoo kale awoodno ka filo saacad Redmi.
Taariikh lama siinin xilligan, laakiin Redmi Watch ayaa hada ku jirta horumar. Soo bandhigid taas oo shaki la'aan noqon karta midda ugu xiisaha badan adeegsadayaasha, maxaa yeelay astaanta ayaa nooga tagaysa moodello qaarkood oo leh qiimo isku dheellitiran, taas oo runtii ka caawinaysa iibka wanaagsan
Redmi Watch wuxuu ahaan lahaa magaca, taas oo u muuqata in la xaqiijiyay. Waxaa la filayaa inay timaado bilaha soo socda, in kasta oo taariikhaha laga bilaabi karo suuqa ay tahay wax qarsoon. Faahfaahin lagama bixin waxa aan ka filan karno saacaddan marka la eego mucaawinooyinka midkoodna.
Haddii aan xisaabta ku darsanno in summaddani ay innaga tagayso moodellada guud ahaan leh qiimo ka hooseeya XiaomiWaxaan filan karnaa in smartwatch-kan uu yeelan doono qiimo ka fudud kan Xiaomi Mi Watch, taas oo macnaheedu noqon lahaa inay xoogaa ka xishoonaato xagga qeexitaanka.
Waa inaan sugnaa inta usbuucyadu socdaan ilaa aan waxbadan ka ogaanno Daawashada Redmi, laakiin waxay umuuqataa in saacadu horay ujirtay. Markaa waxay noqon kartaa kahor dhamaadka sanadkan inay ugu dambayn rasmi noqon doonto. In kasta oo shirkaddu wali bixinayso tilmaamo.
Suuqa dharka lagu xidho ayaa sii kordhaya, Xiaomi inuu yahay mid ka mid ah noocyada ugu iibinta wanaagsan qaybtan. A Redmi Watch waxay ka caawin kartaa shirkadda inay sii xoojiso booskeeda qaybtan suuqa. Waxaan la socon doonnaa wararka ku saabsan saacaddan oo ka socda astaanta iyadoo xiisa laga qabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Redmi sidoo kale waxay ku shaqeysaa qalabkeeda casriga ah
Gboard wuxuu bilaabaa inuu soo jeediyo emojis iyo GIFs